Mareykanka oo musuq-maasuq ku calaameeyey mas'uul hore oo Kenyan ah
Dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday in duqii hore ee magaalada Nairobi Mike Sonko loo aqoonsaday inuu ku lug yeeshay musuq-maasuq xoog leh, oo ay ku jiraan laaluushi iyo wax-isadaba-marin.
Afhayeenka Waaxda Arrimaha Dibadda Mareykanka Ned Price ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay, in lacagaha sharci-darrada ah uu Sonko ku helay qandaraasyo ay dowladda bixisay oo uu siisay dad ay xiriir dhaw lahaayeen.
“Ficilladiisa ayaa wiiqay ku dhaqanka sharciga iyo kalsoonida ay shacabka ku qabaan hey’adaha dastuuriga iyo hannaanka dimoqraadiyadda ee Kenya,” ayuu yiri afhayeen Price.
Xubno qoyska Sonko ka mid ah oo ay ku jiro xaaskiisa Primrose Mbuvi, gabdhahiisa Saumu Mbuvi, iyo Salma Mbuvi ayaa sidoo kale lagu daray liiska musuq-maasuqa.
Aqoonsigani ayaa loo maray qeybta 7031(c) ee Xeerka Howlgalka Dibadda iyo Qoyndeynda Xiriirka Barnaamijka ee Waaxda Arrimaha Dibadda. Sonko iyo xubnaha qoyskiisa ee liiska la geliyay ayaa laga mamnuucay in ay soo galaan Mareykanka.
Sida ay muujisay warbixinti ugu danbeysay ee Waaxda Arrimaha Dibadda ee Xuquuqda Aadanaha ee Kenya, falalka musuq-maasuq ee halista ah ayaa wali dhibaato weyn ku ah Kenya, iyadoo ay jirto “Isla-xisaabtan la’aan taabatay heer kasto oo dowladd ah.”
Mike Sonko ayaa sannadki 2019-ki lagu soo eedeeyay danbiyo kala duwan oo la xiriira musuq maasuq, waxana sannadki 2020-ki laga xayuubiyay xilka guddoomiyaha magaalada Nairobi, kaddib marki lagu eedeeyay dhaqan xumo iyo ku-tagri-falid xafiis. Wali lama soo taagin maxkamad.
Sida ay sheegtay hey’adda Transparency International, Kenya ayaa kaalinta 128 kaga jirto 180-ka waddan ee ugu musuqa badan caalamka, iyadoo “Dadka reer Kenya ay wali ka niyad-jabsanyihiin sida gaabiska ah ee uu ku socdo nidaamka caddaaladda maadaama kiisaska musuqa ay jiitamayaan gudaha maxkamadaha.”
Madaxweyne Joe Biden ayaa qodob weyn ka dhigay la dagaallanka musuq-maasuqa ee siyaasaddiisa dibadda. Aqalka Cad ayaa caddeeyay sababta uu “Musuq-maasuqa u yahay kansar ku dhex-jira jirka bulshada – isla markaana uu yahay cudur liqa kalsoonida mujtamaca iyo awoodda ay dowladi wax ugu gudbi karto muwaadiniinteeda,” sidaasi waxaa lagu yiri bayaan kasoo baxay Aqalka Cad.
“Waxay uga sii dartaa kala qeybsanaanta iyo sinnaan la’aanta bulshada, siyaasadda iyo dhaqaalaha …[waxay] hoos u dhigtaa deegaanka ganacsiga iyo fursadaha dhaqaale, waxay sare u qaaddaa colaadda isla markaana wiiqdaa aaminaadda dowladda. Kuw aku tagri-fala boosaska awoodda si ay ugu manaafacsadaan danahooda gaarka ah, kaliyah ma xadayaan dhaqaalo maaddi ah, balse waxay ku tumanayaan sharafta aadanaha iyo faya-qabkooda.”
Afhayeen Price ayaa sheegay, in ku suntidda guddoomiyihii hore ee Nairobi Mike Sonko iyo xubnaha qosykiisa ay “dib u xaqiijineyso sida ay Dowladda Mareykanka uga go’antahay la dagaallanka musuq-maasuqa iyo taageeridda nidaamka sharciga, iyadoo la xoojinayo hey’adaha dimoqraadiga ah ee Kneya.
Waanu sii wadi doonnaa inaan adeegsanno dhammaan agabyada ay heli karno si aan kor ugu qaadno isla xisaabtanka kuwa ku lug yeesha musuqa gobolkaan iyo guud ahaan adduunyada.”